के पोर्न स्टार क्यामेराका अगाडी सेक्समा चरम आनन्द लिन्छन् ? - Taja Report
Homeभिडियोके पोर्न स्टार क्यामेराका अगाडी सेक्समा चरम आनन्द लिन्छन् ?
July 10, 2018 भिडियो Comments Off on के पोर्न स्टार क्यामेराका अगाडी सेक्समा चरम आनन्द लिन्छन् ?
हामीमध्ये धेरैजसो मानिसहरु पोर्न फिल्म हेर्न मन पराउँछौँ । यसमा लजाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन । यो कुनै अनौठो काम हैन । कतिपय मानिस एकान्तमा बसेर फिल्म हेर्ने पनि गर्छन् । तर पोर्न फिल्म हेर्दै गर्दा कतिपय मानिसको दिमागमा धेरै कुरा घुम्ने गर्छन् । पोर्नस्टार सेक्समा धेरै आनन्द लिन्छन् किनकी पोर्न उनीहरुको दिनचर्याको एक भाग बनेको छ । यस्ता कैयौ प्रश्नहरु छन्, जुन पोर्न स्टारलाई लिएर हाम्रो दिमागमा घुमिरहेका हुन्छन् । आफ्नो वास्तविक जिन्दगीमा यी स्टारहरु कसरी रहन्छन् होला ?
यस्ता कैयौँ प्रश्नहरु पोर्न फिल्म हेर्ने मानिसको दिमागमा घुमिरहन्छन् । यदि तपाईको दिमागमा यस्ता प्रश्नहरु आउँछन् भने यहाँ तपाईका जिज्ञासा मेट्ने केही तथ्यहरू रहेका छन् ।
पोर्नहबले गरायो सर्बेक्षण
पोर्न स्टारसँग जोडिएका प्रश्नहरुको जबाफ जान्नको लागी संसारको सबैभन्दा ठुलो पोर्न वेबसाइट पोर्नहबले एक सर्बे गरेको थियो । जसमा अचम्मलाग्दो तथ्य आयो । यस सर्बेपछि सेक्स अनी रिलेशनसिपका विभिन्न बिषयहरुमा रिसर्च गर्ने मनोवैज्ञानिक ‘जस्टिन जे लेमिल्लर’ले यस सर्बेलाई आफ्नो तरिकाबाट प्रस्तुत गरे । पोर्न स्टारसँग जोडिएका कैयौँ मिथक वास्तविकता गलत भए । जान्नुहोस् यससँग जोडिएका केहि कुराहरुको बारेमा ।
यस्तो दिनुपर्ने थियो जबाफ
यस सर्बेमा पोर्न स्टारको लाइफसँग जोडिएका प्रश्नहरु संकलन गरियो । यसमध्ये एक सर्वेमा केहि प्रश्न महिला पोर्न स्टार त कुनै पुरुषलाई सोधियो । यी दुबैलाई प्रत्येक प्रश्नको जबाफ १ देखि लिएर १० बीचको नम्बरमा दिनुपर्ने थियो । यी नम्बरको बिचमा रहेर जवाफ दिनुपर्ने थियो ।
६९ प्रतिशत महिला पोर्नस्टारले भने…
जब पोर्नस्टारसँग सोधियो की उनी क्यामेराको अगाडी सेक्समा इन्जोए गर्छन् ? १७७ मध्ये ६९ महिला पोर्नस्टारले १० नम्बर दिएका थिए । जसको मतलब थियो, उनी आफ्नो काममा पुर्ण रुपमा इन्जोए गर्छन् । त्यहि प्रश्न पूरुष पोर्नस्टारलाई सोधिएकोमा औषत ८.४ अंक निस्कियो ।
इन्जोए गर्छन् पोर्नस्टार
ओभरडोजका कारण पोर्नस्टार क्यामराको अगाडी खुलेर सेक्स इन्जोए गर्दैनन् भन्ने कुरा सोँच्ने मानिसको लागी यस सर्बेले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । मानिसको त्यो सोँचाइ गलत सावित भएको छ ।
सर्बेमा यो कुरा पनि मानिएको छैन की हुनसक्छ पोर्न कलाकार चरम उत्कर्षमा पुगेको कुरामा भने बढि नाटक गर्छन् । तर यसपछि पनि सर्बेमा यो कुरा अगाडी आयो की कलाकार यस काममा धेरै इन्जोए गर्छन् ।
कुन उमेरमा पोर्नस्टार आफ्नो कुमारित्व गुमाउँछन् ?
लेमिल्लरले केवल सेक्समा इन्जोए गर्ने कुराको बारेमा मात्र डाटा एकत्रित गरेनन् । उनले यो पनि जाने की यस उद्योगमा आएपछि कुन उमेरमा उनीहरुले आफ्नो कुमारित्व गुमाए । धेरैजसो पोर्नस्टारले १५ बर्षको उमेरमा आफ्नो कुमारित्व गुमाए ।
अफ स्क्रिनमा पर्फमेन्स
यस सर्वेमा डा. लेमिललरले एक अन्य कुरालाई अगाडी ल्याए । के अफस्क्रिनमा यी पोर्नस्टार आफ्नो सेक्सुअल पार्टनरसँग सेक्समा इन्जोए गर्छन् ? यी कलाकारले अलग मापदण्डहरुको आधारमा बताए अनुसार अहिलेसम्म ७४.८ प्रतिशत सम्म अनी पछिल्लो साल ९.६ प्रतिशत सेक्स लाइफमा इन्जोए गरेका छन् ।
पुरुष पोर्नस्टार गर्छन् धेरै इन्जोए
यहि सन्दर्भमा पुरुष पोर्नस्टार अफ स्क्रिनमा आफ्नो सेक्स पार्टनरसँग सेक्स लाइफ बाँचिरहेको बताउँछन् । सर्वे अनुसार अहिलेसम्म १७०.१ प्रतिशत सम्म अनी पछिल्लो समय ८.१ को औषतमा सेक्सुअल लाइफमा इन्जोए गरिरहेका छन् ।
अध्यात्ममा गर्छन् धेरै इन्जोए
यस सर्वेमा एक अन्य कुरा अगाडी आयो की पोर्न कलाकारीतामा नियमित रुपमा काम गरिरहेका महिलाहरुको आत्मसम्मान अनी आत्मविश्वासको स्तर उच्च थियो । उनी सामान्य महिलाको तुलनामा बढी अध्यात्ममा जोड दिन्छन् । जुन कुराले तपाईलाई अचम्ममा पार्न सक्छ । यो सर्वेको डाटा १७७ महिला अनी १०१ पुरुष पोर्न स्टारमा आधारीत थियो ।
ट्रिपरले फेरि दियो मोटरसाइकल लाई ठक्कर , १ जनाको मृत्यु